Sibhedlela Wezingane "Kratovo" esifundeni Moscow: incazelo kanjani ukuze uthole
Ngo Ramenskoye esifundeni esifundeni eMoscow, sizungezwe amahlathi kuyinto sibhedlela sezingane "Kratovo" (esifundeni eMoscow), subordinated ukuba Ministry of Health yeRussia. Naphezu isondele kakhulu kuyi-dolobha, ibanga okuyinto amakhilomitha amane kuphela, lokhu sezempilo itholakala abakuleyo ndawo Isizalo ahlanzekile. Crystal emoyeni okuqukethwe ocebile umoya-mpilo emkhathini futhi ukukhiqizwa oluyingozi kudala izimo ezikahle for ekwelapheni izingane nezinkinga zokuphefumula.
Okubonisa ukuthumela izingane kulesi sibhedlela esifundeni "Kratovo" eMoscow kuba phambi eziningi izifo zesimiso broncho-pulmonary. Futhi lapha zamukelwa izingane bexhwalile ukutakula. Nokho, kukhona Izimo for ukuhlala sezingane esibhedlela:
esigabeni acute lesi sifo;
Ngo sibhedlela "Kratovo" eMoscow Region amukela izingane zasenkulisa kanye nobudala esikoleni samabanga aphansi iminyaka esuka kwemine kuya eziyisishiyagalolunye. Njengoba indawo yezempilo khona izingane eziphakathi kweminyaka emine kanye nambili nomunye umzali. Ukuze abafundi basesikoleni esiphakeme phakathi nokuvakasha kwazo kuleli yokungcebeleka ukunikeza uqeqesho. Ngemva kokuphothulwa impatho ingane unikezwa emamaki umbiko ikhadi. Zonke izifundo ziqhutshwa ngohlelo ekhethekile engxenyeni yokuqala yosuku. Izingane efika nabazali bazo bekwi bebodwa. Uma kudingekile, uthisha leluleka abazali ezicini ezihlukahlukene zokufunda zezingane. Kuthatha uqaphele ukuthi izimpahla zesikole kulesi sibhedlela kungukuthi esikhishwe, kufanele ulethe bebodwa.
Ngaphezu nokuvuselelwa kanye nekuceceshwa izingane enikeziwe inqwaba izinhlelo ukuzijabulisa. Lokhu amaqembu iholide, zonke izinhlobo imidlalo, waseshashalazini futhi isekisi ukusebenza. Esikhathini imibuthano usebenza nezikhungo zezempilo, izingane nethuba ukuthuthukisa amakhono zokudala. Sebenza nezingane eyenziwa kwabasebenzi abaqeqeshiwe zokufundisa: othisha umculo ochwepheshe. Ukuze ukubhukuda kukhona ichibi yesimanje zasendlini, evulekile unyaka wonke. Uhambo lwakhe senzeka ngaphansi kweso elibukhali abaqeqeshi abanolwazi ukubhukuda futhi ukunakekelwa kwezempilo abasebenzi. Kuze kube izikhathi ezingamashumi amabili ngesonto, izingane zingaba khona sauna zokwelapha. izimo ukhululekile sokuzilibazisa zinikezwa ezingeni eliphezulu wenduduzo, esidalelwe izivakashi abasebasha.
Izingane emazweni spa yesimanje, uMnyango wezeZindlu evuthayo, okuyinto zihlukaniswe amayunithi eziningana zokuhlala, ehlanganisa lokulala, playroom, yokugezela egunjini lokudlela. Okulala (ngokuhlukile amantombazane nabafana) kukhona imibhede yesimanje ukhululekile. Phansi emakamelweni ayegcwele nge linoleum. Izingane bahlelwe baba amaqembu abantu amabili. ukunakekelwa nsuku zonke ngabo inikezwa yi shift izisebenzi, ehlanganisa i umfundisi ongumakad 'ebona, oqeqeshiwe nabahlengikazi okhathalelayo.
The guys esimweni sibhedlela sinikeza eziyisithupha yesikhathi yokudla nsuku zonke, okuyinto wavumelana kudokotela. Ezinganeni abeza nabazali babo, zikhona ongakhetha eziningana yokuhlala. Basuke indawo amakamelo ukunethezeka amafulethi elilodwa elalingaphandle angazamukela abantu abane. UMnyango izingane nabantu abadala wenziwa ukudla nsuku zonke futhi izindlela zokwelapha ezikhona kuma-oda kadokotela.
Ukuze ukuzilibazisa enempilo izingane nabazali bazo kuleli yokungcebeleka has a ejimini nge imishini yesimanje, kanye ichibi futhi sauna. Ezinganeni aphethwe zonke izinhlobo zemisebenzi ezemidlalo nokuzijabulisa isiqondiso. Ngisho eyayenziwa esibhedlela has a umtapo wezincwadi, imidlalo Igumbi lapho izingane zingaba nobumnandi. ukuphepha yokuhlala kuqinisekiswa khona insimu ebiyelwe kanye nizungeze ukuphepha clock. Leli bhokisi yokuhlala inikeza okuqhubekayo komsebenzi umlawuli futhi abezokwelapha.
Ukwelashwa Kwenziwa nodokotela bezingane abaqeqeshiwe futhi odokotela-Ochwepheshe. Njengoba izindlela izingane nokuvuselelwa esetshenziswa Physiotherapy, speleotherapy (usawoti emhumeni), iyunithi "Intaba Air", zokugeza okwelapha, lapho ephefumula, izinhlobo eziningana massage, imithi. zokwelapha abazenzi nokusetshenziswa kwemishini yezokwelapha zesimanje, okuyinto kakhulu kwandisa ukuphumelela kwazo.
Ukuze uthole indawo kungaba ku yizinqola ezizimele ngokusebenzisa edolobheni Lyubertsy endleleni eya Ramenskoye kuze "sibhedlela Wezingane Kratovo" isibonakaliso. Futhi ukuza resort impilo ingaba ngesitimela. Kusukela Kazan Station isitimela ushiya esiteshini Kratovo. Okulandelayo, udinga ukuhamba cishe ikhilomitha, kulandela izimpawu zomgwaqo. Lesi sivumelwano Kratovo eMoscow Region, lapho itholakala sibhedlela, owaziwa ngokuba umoya walo fresh futhi amaphethelo ebabazekayo. Nasi nice aphathwa ngayo, futhi nje uphumule.
Ingabe Esiteshini ngokuphelele ngaphandle Mytishchi?
Ezemidlalo Nutrition: Ingabe peptides kuthiwa kubalulekile abasubathi?
Kanjani esibelethweni multifollikulyarny, nokuthi kudingeka aphathe ke?
Ukushayela nge trailer - umshayeli Memo